'चीनलाई हामीले जाँच्यौँ, संकटको साथीका रुपमा देखापर्‍यो' - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
'चीनलाई हामीले जाँच्यौँ, संकटको साथीका रुपमा देखापर्‍यो'
चीन भ्रमणमा रहेका एमाले नेता माधव नेपाल भन्छन्, 'रेल केरुङ्गबाट नेपाल पुग्न त कुनै गाह्रो छैन'
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल भदौ २ गतेदेखि चीनको भ्रमणमा छन्। उनी हुनान प्रान्तको तेक्वान्दो खेलकुददेखि माओ त्से तुङको जन्मस्थल साओसान भ्रमण, सिआन सहरका बौद्ध सम्पदा र बौद्ध धर्मको अध्ययन लगायतका विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा व्यस्त छन्। उनले चीनमा १२ दिन बिताउनेछन्। एमालेका केही नेतासहित लुम्बिनी विकास कोषका प्रतिनिधि र भिक्षुहरुसँग चीनको राजधानी बेइजिङ्ग पुगेका नेता नेपालसँग पत्रकार लक्ष्मी लम्सालले गरेको कुराकानीः
तपाईंको चीन भ्रमणको उद्देश्य के थियो? यो भ्रमणबाट के उपलब्धि हासिल हुन्छ?
मेरो यसपटकको चीन भ्रमण 'पिपुल टु पिपुल लेवल' (जनस्तर)मा केही सामाजिक संस्थाहरुको निमन्त्रणामा भएको हो। एउटा त, तेक्वान्दोको अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बोलाइएको थियो। साथै, हुनान प्रान्तको साओसानमा माओ त्से तुङको जन्मस्थान घुम्ने कार्यक्रम पनि थियो। बेइजिङमा प्रथम नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री महोत्सवमा पनि भाग लिएँ। जहाँ नेपालबाट आएका प्रतिनिधि र चीनका विभिन्न ठाउँबाट आएका भिक्षुहरु, सामाजिक संस्थाका अगुवाहरुको राम्रो सहभागिता थियो। यो सिलसिलामा नेपाल र चीनबीच लुम्बिनीको सन्दर्भमा कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ? शान्ति र मित्रतालाई अभिवृद्धि गर्न के-के उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ? भन्नेबारे छलफलहरु भए। दुवै देशबीच जनस्तरमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले सिआन र छङ्गतु सहरमा पनि सामाजिक अगुवाहरुसँग भेटवार्ता गर्दैछु।
लुम्बिनीको समग्र विकाससँगै चीन र नेपालका जनताबीच जनस्तरमै के काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले म चीन आएको हुँ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। चीन कस्तोखालको छिमेकी हो?
चीनलाई हामीले संकटको बेला जाँच्यौँ। चीन संकटको साथीका रुपमा देखापर्‍यो। हुन त पहिला पनि देखापर्दै आएको हो। अहिले ठुलो संकटका बेला पनि चीनले हामीलाई साथ दियो, सहयोग गर्‍यो। केही सहमति-सम्झौताहरु पनि भए, जसलाई लागू गर्नुपर्नेछ। नयाँ सरकारले त्यो लागू गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यसले दुवै देशबीच सम्मान र सहकार्यको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउँदै लगेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणको प्रतीक्षामा नेपाली जनता छन्। त्यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि नेपालले कस्तो तयारी गर्नुपर्ला?
हामीले गर्ने भनेको, भएका सहमतिहरु लागू गर्नका लागि ठोस निर्णय र ठोस कामहरु थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। ती सबैमा नयाँ सरकारले पहिलेको एमाले सरकारको समयमा भएका सहमतिलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नेछ र गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हाम्रो दबाव पनि हुनेछ, अपेक्षा पनि हुनेछ। उहाँहरुले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संसदमा पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। अहिले पनि उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा सम्भवतः ती सबै विषयमा कुराकानी भएकै होला।
यदि चिनियाँ राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण भयो भने नेपालले कस्ता सम्झौता गर्नुपर्छ? कार्यान्वयनको पाटोमा के-कस्ता कुरा लैजानुपर्छ?
धेरै कुरा छन्। सडकको, रेलको, कनेक्टिभिटीका कुराहरु छन्। त्यसैगरी, हामीसँग इन्धनका कुराहरु, स्टोरेज (भण्डारण)का कुराहरु पनि छन्। त्यसपछि नयाँ-नयाँ नाकाहरु खोल्ने कुरा छन्। त्यसबाहेक भूकम्प पीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने कुराहरु पनि छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनीको प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने कुराहरु छन्। यसको अलावा मेरो बढ्ता जोड चाहिँ मध्यपहाडी राजमार्गमा चीनले ठूलो मात्रामा सहयोग गरोस् भन्नेतर्फ छ। एउटा चार लेनको बाटोको काम अगाडि बढाओस् भन्नेमा छ। मैले हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही अघि पुष्पकमल दाहाललाई पनि यो कुरा चीन सरकारसँग गर्नुहोस् भनेको हुँ। मध्यपहाडी राजमार्गमा चीनले कमसेकम चार सय किलोमिटर, सकेसम्म पुरै, होइन भने केही भाग मात्रै बनाइदियो भने नेपालको निम्ति निकै ठूलो गुन लगाएको हुनेछ भनेर मैले जोड दिएको थिएँ। त्यसबाहेक त काठमाडौं, लुम्बिनी, पोखरासँग रेलवेका कुराहरु त छँदैछन्। त्यसमा हामीले ठूलो आशा-अपेक्षा त गरिरहेकै छौं।
हामीकहाँ आशा-अपेक्षा गर्ने तर राजनीतिक बेमेललाई दोष दिने चलन छ। खासै कामलाग्दा पूर्वाधार तयार पारेको देखिँदैन नि, किन?
राजनीतिक बेमेलले, सरकार परिवर्तनले त्यसलाई केही पनि असर गर्दैन। हेर्नुस्, इटलीमा सरकार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर आर्थिक विकास आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेकै हुन्छ। नेपालमा पनि यसले केही पनि असर पार्दैन, किनभने चीन सम्बन्धमा हाम्रो नीतिमा कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन।
नेपालमा रेल पुग्न सम्भव छ त?
रेल सिगात्सेबाट यदि केरुङ्गसम्म पुग्यो भने केरुङ्गबाट नेपाल आउन त कुनै गाह्रो छैन।
चीनको सीमासम्म त आउला तर नेपालमा काम नभएपछि नेपालभित्र कसरी आउँछ?
कुनै समस्या छैन। किनकि हामीले नुवाकोटबाट काठमाडौं सुरुङ्गमार्ग खोल्ने कुरा भनिसकिएकै छ, त्यो कुनै समस्याको कुरा भएन। त्यसैगरी धादिङको गल्छीबाट चितवनमा निकाल्ने हो भने पनि कुनै समस्या भएन। पोखरा लानका लागि पनि कुनै गाह्रो छैन। यसबारेमा प्रमुख पार्टीहरुको बीचमा लगभग सहमति नै छ।
वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार चीनसँगका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ला जस्तो लाग्छ?
अब उसको जाँच हुन्छ, अग्निपरीक्षा हुन्छ। हामीले कुरा उठाइरहेका छौं। जनताका माझमा पनि उहाँहरुलाई प्रश्न सोधिरहेका छौं।
तपाईंले बौद्ध धार्मिक संस्थामा लागेर के गर्ने सोच्नु भएको हो?
विश्व बौद्ध केन्द्रमा म आबद्ध छु। यसको उद्देश्य धार्मिकभन्दा पनि लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित गराउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो। मुस्लिमहरुका निम्ति मक्कामदिना भनेजस्तै, क्रिश्चियनहरुका निम्ति जेरुसेलम भनेजस्तै संसारभरिका बौद्ध धर्मावलम्वीका लागि नेपालको लुम्बिनीलाई किन बनाउन सकिँदैन भनेर म सुरुदेखि नै लागिपरेको हो। पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री भएपछि सन् १९९४ देखि नै मैले धार्मिक पर्यटन विकास गर्न लुम्बिनी, जानकीधाम र पशुपतिनाथको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास जारी राखेको छु। त्यसैले लुम्बिनीको विकास गर्ने र लुम्बिनीलाई संसारभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको तीर्थस्थल बनाउने ध्याउन्नमा म सँधै तल्लीन हुनेछु।
प्रकाशित ८ भदौ २०७३, बुधबार | 2016-08-24 21:05:48